★မြန်မာ့အလင်း★: သမထနှင့် ၀ိပဿနာ
မွတ်ဆလင်တွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ မွေးဖွားပေမယ့်၊ မြန်မာစာကို တတ်မြောက်ပေမယ့် ၊ ဗုဒ္ဓစာအုပ်များကို လွယ်လင့်တကူ ၀ယ်ယူ ဖတ်ရှုနိုင်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာကို မလေ့လာခဲ့ပေ။ ပလီဆရာတွေ ပြောတဲ့ ရုပ်တုကို ကိုးကွယ်တယ်ဆိုတဲ့ စကားပဲယုံပြီး စူးစမ်းလေ့လာမူမလုပ်ကြခြင်းမှာ မှန်ပါသလား?။ ကျနော်တို့ တောသားနှစ်ယောက် ဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့ မွတ်ဆလင်တွေရှိပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း နည်းနည်းပါးပါး တီးခေါက်မိအောင် ဗုဒ္ဓဘာသာဆောင်းပါးလေးတွေ တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင်တွေ အနေနဲ့ သိချင်တာတွေရှိက comment ကနေ မေးပါ။ ကျနော်တို့ သိရင်ဖြေပေးပါမယ်။ တခြားဗုဒ္ဓဘာသာတွေကလည်း ဖြေပေးပါလိမ့်မယ် အခုဆောင်းပါးကို Dhamma Web မှ ကူးယူဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အထက်တွင် မြင်တွေ့ရသည် အိန္ဒိယရဲများ ၀ိပဿနာလုပ်ရခြင်း အကြောင်းကို သိလိုပါက ယခင်ဘလော့အဟောင်းတွင်ရှိသည့် မြန်မာဆိုရင် ဂုဏ်ယူပါ ဆောင်းပါးမှ မော်ကွန်းဗီဒီယိုမှာ ကြည့်ပါရန်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 4:57 AM
I was not turned into Stone
Why I Left Islam (Ali Sina)
အားသန်ထားပါ၊ မာန်တင်းထားပါ၊ ဒို့အောင်မြင်မှာပါ
မွတ်ဆလင်မတွေသည် အကျင့်ပျက်မိန်းမတွေသာဖြစ်ကြောင်း. ...
မေတ္တာအစွမ်းနဲ့ မွတ်ဆလင်ဝါဒ မြန်မာ့မြေမှ ပျောက်ကွယ်...
The Development ofaMuslim Enclave in Arakan (Rak...
ကုလားလိမ်ကြောင်း လူသိအောင် လုပ်မှဖြစ်မယ်